SEHATRY NY ANKIZY - Mpitondra 1787-2018
Efatra taona tato aoriana Ny 7 septambra 2018 dia nametram-pialana ny filohan'ny HVM Hery Rajaonarimampianina. Satria hisy ny fifidianana ary hirotsaka izy. Lalana velona izany fa tsy afa-mirotsaka izy raha tsy miala.
Rivo Rakotovao Filohan'ny antenimieran-doholona, akaiky azy, no mitantana vonjimaika ny raharaham-pirenena misalotra ny anarana ho filoha vonjimaika, miaraka amin'ny praiminisitra Ntsay.
Ny taona 2018 araka ny lalampanorenana dia tokony hisy fifidianana ny ho mpitondra manaraka.